I-suite ebanzi ewubukhazikhazi uJordaan - I-Airbnb
I-suite ebanzi ewubukhazikhazi uJordaan
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Job & Judith
U-Job & Judith Ungumbungazi ovelele
I-Het Behouden Huis itholakala eJordaan, esikhungweni somlando sase-Amsterdam. Ngawo-1980, izindlu eziningi endaweni zadilizwa. Umnikazi wale ndlu, ngokuyivuselela yedwa, wenze isiqiniseko sokuthi le ndlu iyasindiswa.
Sicela uqaphele, asisalisebenzisi ikhishi (ngenxa yomthetho omusha we-BnB) Siseneketela, ifriji nomshini wekhofi.
I-suite kanokusho inakho konke okudingayo. Ingxenye yangaphakathi ithokomele futhi inothando, inokugeza okubuka ingadi kanye neshawa enhle. Umbhede ukhululekile kakhulu futhi unombono wengadi futhi. Entwasahlobo nasehlobo uzojabulela izinyoni eziculayo. Sine-stereo ye-Bowers & Wilkens ene-airplay ukuze sijabulele umculo othile. Ungaba nesihlalo engadini ukuze ujabulele imisindo yenyoni, ikhofi noma uhlale eceleni komgwaqo ukuze uxoxe nomakhelwane. Sinomshini wekhofi we-Nespresso kanye nawe. Konke ngendlela enhle yokujabulela amaholide akho!
4.91 · 404 okushiwo abanye
I-Jordaan iyindawo ekhetheke kakhulu. I-Is yacishe yenqatshwa ngeminyaka yama-70/80s ngenxa yesimo se-ghetto. Namuhla iyindawo edume kakhulu yokuhlala, ukusebenza kanye nokuvakasha. Idolobhana layo elincane phakathi nedolobha. Ayikho imigwaqo emikhulu noma izakhiwo, konke kuncane. Uthola amabha amancane athokomele kanye nezindawo zokudlela. futhi ungakwazi ukuhamba iminyaka eminingi ukuze uhlole izitaladi ezincane nezinhle. Okujabulisayo ukuthi abantu abajwayele ukuvala amakhethini abo, ngakho-ke uma uthanda ukwazi ungabona ama-interieurs amaningi avela eceleni komgwaqo! Indlu edumile ka-Anna Frank iseduze kakhulu, ungacishe uyibone usuka efulethini. I-Vondelparc ethandekayo, iyindlela enhle yokukhetha ehlobo. Uzobona abantu begijima, begibela, begijima futhi bejabulela isikhathi samahhala nengilazi yewayini.
Ibungazwe ngu-Job & Judith
Mina nodadewethu sihlala esitezi esiphezulu esitezi sokuqala nesesibili. Siyabonga uma uzizwa ukhululekile ukusithinta. Ungashayela, usithumelele umlayezo noma uvele ushaye insimbi, nasebusuku uma kunesimo esiphuthumayo!
UJob & Judith Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 0363 8BCA 2753 E6BA 2C6E